Hal ku dhagga "Caruurtu iib ma ahan" barnaamijka Musikhjälpen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hena waa 18 jir u dhalatey Bangaledesh, waxaana lagu soo sirey shaqo ayaa lagu siinayaa ka dibna jirkeeda ayaa si khasab ah looga ganacsadey. Foto: Farzana Hossen / Save The Children
Programbild för Musikhjälpen
summadda barnaamijka Musikhjälpen ee sannadka 2017.
Hal ku dhagga "Caruurtu iib ma ahan" barnaamijka Musikhjälpen
La daabacay onsdag 20 september 2017 kl 10.00
Halkii daqiiqaba afar caruur ah ayaa dunida hab dhileysi ah loogu iibiyaa .
Qaar ka mid ah caruurahaas ayaa fakhri la ildaran, fakhrigaasina wuxuu ku khasbaa in ay jirkooda gadaan si ay qoyskooda quudintiisa qeyb uga geystaan. Caruurtaasi in ay jirkooda hab dhileysi ah u iibshaan ayaa mararka qaarkood ah wadada kaliya oo caruurahaas u furan.
Waa mamnuuc in laga ganacsado, la iibsado ama laga qeyb qaato ka ganacsiga bani’aadamka laakiin sidaas oo ay tahay hadana ka ganacsiga dadka ayaa ah danbiyada ugu waaweyn ee dunida ka dhaca.
Caruurta oo hab dhileysi ah looga ganacsado ayaa ah ganacsi xoog leh oo laga macaasho lacago balaayiin ah.
Ilaa laba milyan oo ilmood ayaa sanad walba waxaa loo isticmaala ka ganacsiga jirkooda laakiin ururka qaramada midoobey ayaa sheegey in dalka Hindiya oo kaliya caruurta jirkooda laga ganacsadaa ay dhan tahay 1, 2 miyan oo ilmood.
Ka ganacsiga caruuraha dhileysiga loo iibsho ayaa wajiya badan leh sida tusaale ahaan dalxiisayaasha oo dalalka ay booqdaan ka iibsada wiilal ay u galmoodaan iyo waalidiinta ilmahaas qaarkood dhashey oo caruurtooda iibsha iyagoo aaminsan in caruurtaasi ay shaqooyin heli doonaan balse taas badalkeeda caruurahaas hab dhileysi ah looga ganacsado.
Hey’ad qaaraanka uruurisa ee lagu magacaabo Musikhjälpen ayaa hadda wada qorshe ay rabto in ay arrinkaas wax uga qabato.
Musikhjälpen ayaa dooneysa in ay caruuraha iyo dhallaanka ku baraarujiso xuquuqdooda, ayna sidoo kale magacawdo safiiro caruuraha u gaar ah oo fikradahaas si toos ama si dadban caruurahaas ugu gudbiso dhibahaas khatarta u ah.
Musikhjälpen ayaa rabta in ay lacag arrinkaas u uruuriso si lacagahaas loogu dhiso goobo lagu daryeelo caruuraha ka soo baxa goobaha dhileysi ahaan looga ganacsado caruuraha.
Musikhjälpen ayaa sanadkaan wxay hal ku dhag ka dhigatey :
”Caruurtu iib ma aha”.
Si caruuraha dalkaan joogaa ay hawshaas uga qeyb qaataan ayaa Musikhjälpen iyadoo kaashaneysa idaacadda Sweden waaxdeeda dhanka waxbarashada dadweynaha u qaabilsan (UR), waxay sanadka soo socda oo dhan baahin doonaan barnaamijyo arrinkaas tooshka loogu ifinayo